BUDDHIST TERMS' Dictionary: SUITABLE PLACE - ဧကမန္တ
SUITABLE PLACE - ဧကမန္တ
ဧကမန္တ (Ekamanta) - သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော အရပ်။
အသိဉာဏ်ရှိသူတို့သည် ဘုရား, တရား, သံဃာ, ဆရာ, မိဘ စသော အလေးဂရုပြုအပ်သူတို့ထံသို့ ဆည်းကပ်ခစားသောအခါ သင့်လျော်လျောက်ပတ်သောအရပ်၌ နေ၍သာ ဆည်းကပ်ခစားကြသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ဆည်းကပ်ခစားမှု ပြုရခြင်းသည် ပညာရှိတို့၏ ကောင်းမွန်သော ထုံးတမ်းစဉ်လာ ကျင့်ဝတ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အလေးဂရုပြုအပ်သူနှင့် ဝေးကွာလွန်းခြင်း၊ နီးကပ်လွန်းခြင်း၊ လေတင်အရပ်ဖြစ်ခြင်း၊ မြင့်မြတ်သော နေရာဖြစ်ခြင်း၊ ရှေ့တည့်တည့်ဖြစ်ခြင်း၊ နောက်ဘက်တည့်တည့်ဖြစ်ခြင်းဟူသော အပြစ် ၆-ပါး ကင်းလွတ်သော နေရာကို “သင့်လျော်လျောက်ပတ်သော နေရာအရပ်” ဟု ခေါ်သည်။
When approachingaperson worthy of respect, such as the Buddha, the Dhamma, the Saṁgha, one’s parents and teachers,awise person occupiesasuitable place. This isanoble custom practiced by the wise. A suitable place there means staying neither too close nor too far from the revered one,aplace which is neither upwind nor atahigher level in relation to his and where one is not directly facing him or with one’s back towards him. These six attributes constituteasuitable place where one may attend onarevered person.